Orinasa Desktop - Mpanamboatra Desktop China, mpamatsy
Fanadiovan-drivotra / Desktop / AP-D01
Ilay mpanadio rivotra natao tsara dia nasiana sivana HEPA miaraka amin'ny sivana mialoha, azon'izy ireo ny poti-javatra sy gazy manimba toy ny PM2.5, vovoka, vovobony ary setroka, hanafaka anao amin'ireo fandrahonana mety hanimba. Ary arahan'ny ion ratsy miiba 8 tapitrisa pcs / cm³ hatramin'ny avo roa heny hanadio ny toerana, hamono ny vovoka manimba, vovobony ary setroka amin'ny tany sy hanavao ny rivotra, hahatonga anao hijanona toy ny any an'ala, hanamaivana ny hozatra sy ny fihenjanana. Miasa amin'ny efitrano 20m³ izy io. Azonao atao ny mametraka azy ao amin'ny efitrano famakianao, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fatorianao na birao.
Miasa toy ny hamandoana koa izy io, na dia manadio ny rivotra aza izy dia manampy mandena ny rivotra maina, mando ny hoditrao, mampihena ny mahazaka otrikaretina anao. Tena manampy amin'ny fararano maina, ririnina ary lohataona mahazaka mora, ary manampy amin'ny efitrano AC maina amin'ny fahavaratra. Azo antoka fa mahatonga anao amin'ny tontolo milamina andro aman'alina amin'ny vanim-potoana rehetra.
Namboarina tamin'ny jiro miloko 7 loko hafa izy io, mamorona atmosfera falifaly, hahatsapa ho maivamaivana sy hiala sasatra ianao, miaraka amin'ny endriny mahafinaritra, haingo mahafinaritra ho an'ny tranonao na ho an'ny biraonao. Ary amin'ny alina dia miasa toy ny jiro amin'ny alina misy jiro fotsy malefaka izy io, manampy anao hamaky, arovy ny masonao.
Tsy fanadiovan-drivotra fotsiny io, fa miasa mihoatra noho izany. Ary singa mahafinaritra amin'ny orinasa fampiroboroboana ny fampiroboroboana ireo marika. Ny lafiny 4 dia misy faritra banga betsaka hanolotra logo. Miaraka amin'ny asany azo ampiharina, kalitao maharitra ary tsara endrika, izy dia hahazo fandraharahana be dia be.
Fanadiovan-drivotra / Desktop / AP-D02
Ity fanadiovan-drivotra modely ity dia manambatra ny fanadiovan-tsivana HEPA sy ny fanadiovan-tsolika entona manadio ny habakao. Ny sivana H11 HEPA miaraka amina sivana mialoha dia misambotra zavatra manimba eny amin'ny habakabaka toy ny PM2.5, vovoka, setroka ary vovobony, manafaka anao amin'ny sneeze, fitohanana ary soritr'aretina hafa azo avy amin'ny rivotra ateraky ny fahalotoan'ny rivotra. Ny karbaona fanadiovana faharoa dia manala ireo simika simika manimba toy ny formaldehyde, benzene, VOC, ary koa manala fofona tsy mahafinaritra. Raha tompona biby ianao dia manampy ny loza ateraky ny biby izany ary mifoka ny fofon'ny biby, ahafahanao mankafy ny biby fiompy ary afaka amin'ireo faritra ratsy. Izy io dia miasa amin'ny efitrano 10m³- 20m³.
Araka ny ahitanao azy endrika tsy manam-paharoa sy mahafinaritra, zaridaina kely ho an'ny zavamaniry tianao izay afaka maniry rano. Ary afaka mitazona trondro sasany koa ianao. Izy io dia zaridaina bitika ao anaty ary haingon-trano tsara tarehy ho an'ny tokantranonao. Miaraka amin'ny jiro manga amin'ny antoandro sy ny hazavana fotsy hafa amin'ny hazavana fotsy amin'ny alina, izay mamela ny habaka ho tantaram-pitiavana sy mahafinaritra. Ny jiro dia mety hanampy ny famakinao amin'ny alina maizina, tsara ho an'ny masonao. Azonao atao ny mametraka azy ao an-dakozia, efitrano fandriana, birao na toerana hafa tadiavinao.
Izy io dia vita amin'ny fitaovana ABS avo lenta, ho hitanao fa loko fotsy mahafinaritra sy mahafinaritra izy io, ary mahazaka be, raha mianjera amin'ny haavon'ny 10m ianao dia tsy hisy ratra. Koa aza manahy raha tsy tonga saina izany dia milatsaka amin'ny tany. Fitaovana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana izy io hahatonga ny fiainanao ho salama sy ho sambatra kokoa.
Mitombo Lightin, Jiro zavamaniry, Mitombo ny avotra, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mamboly hazavana, Mitombo Ligh,